सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले नै काम गर्न छोडेपछि म्यानमारको सैनिक शासन संकटमा| Corporate Nepal
सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले नै काम गर्न छोडेपछि म्यानमारको सैनिक शासन संकटमा
फागुन ४, २०७७ मंगलबार १५:१४
काठमाडौं । जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेसँगै म्यानमारमा सैनिक सत्ताविरुद्ध आन्दोलन चर्किएर गएको छ । दुई साताअघि मात्रै नेतृ आङ साङ सुकीसहितका नेताहरुलाई नजरबन्द गर्दै सेनाको जुन्ता सरकारले सत्ता हत्याएपछि त्यसको विश्वभरबाट विरोध भइरहेको छ । तर, छिमेकी चीनले भने सेनाको कदमलाई भित्रभित्रै समर्थन गरेको बुझिएको छ ।
सेनाले विरोध प्रदर्शनमा कडाई गर्दै एक बर्षको संकटकाल घोषणा गरे पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन् । जनताको विरोध बढ्दै जाँदा म्यानमारका सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूसमेत काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कतिपय प्रहरी अधिकारीहरुले समेत जनताको प्रदर्शनलाई साथ दिए पनि म्यानमारको सेना अप्ठेरोमा परेको छ।
जुन्ता सरकारले दिनदिनै सूचना निकालेर काममा फर्किन सबै कर्मचारीहरुलाई आव्हान गरे पनि उनीहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । काम बहिष्कार गरेर कर्मचारीहरु नै जुलुसमा लागेपछि म्यानमारको सरकारीदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्मको सेवा प्रभावित भएको छ ।
जुन्ता सरकारले आन्दोलनमा लाग्नेहरुलाई २० बर्षको जेल सजाय हुने चेतावनी दिँदै आएको छ । दिउँसो आन्दोलनमा सहभागीलाई राति कर्फ्यूका बेला सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गर्ने भयले टोलटोलमा नागरिक सुरक्षा समूह बनाइएको छ ।
साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रदर्शनकारीहरूमाथि दमन गरे सैनिक सरकारले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
कोरोना कहरका बीच पनि चीनको अर्थतन्त्रमा तीब्र वृद्धि, जीडीपी १८.३ प्रतिशतले बढ्यो
बैशाख २, २०७८ बिहिबार
अफगानिस्तानसँगको अमेरिकाको लामो युद्ध बाइडेनद्धारा अन्त्यको घोषणा
युएईले अन्तरिक्षमा पठाउन चार हजार आवेदकबाट एक महिला र एक पुरुषलाई छान्यो
म्यानमारमा सैन्य दमन अझै चर्कियो, एकै दिन ८० जनाको मृत्यु
चैत २१, २०७७ शनिबार
ताइवान रेल दुर्घटनाबाट देशभर शोक, एक दशकयताकै भयानक दुर्घटना
क्ल्च बिनाको हुन्डाई ‘भेन्यु आईएमटी’ नेपाली ग्राहकको रोजाईमा
नबिल बैंकलाई नम्बर १ को ताज जोगाउन धौधौ, प्रतिस्पर्धी आक्रामक बन्दै
२०७८ मा सेयर बजार कस्तो रहला ?
नबिलका सीईओ शाहले जिते एक करोडको मुद्दा, क्षतिपूर्तिसहित २ करोड २७ लाख पाउने
एक करोड ३ लाख कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कस्को कति ?
३९ लाख २१ हजार कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
साना उद्योगी व्यवसायीको महासंघले जेठमा महाधिवेशन गर्ने
उद्योग बाणिज्य महासंघले बनायो अनुशासन समिति, सभापति रविभक्त
ओलीले फोन गरेर बोलाए पनि प्रचण्ड सर्वदलीय बैठकमा गएनन्, माधव र प्रचण्डको छुट्टै भेट
साखः ग्रुपका अध्यक्ष गणेश साखःको निधन
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बाँडफाँट गर्यो संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यहरुले पाउने रकम